Story ofaStriker
The Article is published in Gorkhapatra, dated 2010 October 1.
चिम्सा तर आकर्षक आँखा भएका १९ वर्षिय उदयिमान युवा खेलाडी निराजन मल्ललाई कतिले लोभ्याएका होलान् ? उनलाई 'केटी–सेटी/लभ–सभको चक्करमा फस्नु छैन' रे! यत्रो स्टार भएर पनि किन यस्तो होला, अचम्म छ! निराजनका आँखामा लाजका स्पष्ट तरंग नाचेका देखिन्थे। 'गर्लफ्रेन्ड त छैन मेरो!' स्पाइकी हेयरस्टाइल रुचाउने लजालु निराजन भन्छन्। उनलाई ट्रयाक र जर्सी मन पर्छ, जुत्ताका पनि खुबै सौखिन। देशबाहिर जाँदा आफूलाई मन पर्ने एकजोर जुत्ता किनिछाड्छन्।
फोटो स्रोत : www.goalnepal.com
निराजनको जन्मथलो चितवन। बाल्यकालको पाँच वर्ष तौलिहवामा बित्यो। यै बेला उनलाई फुटबलमा रस पस्यो। 'तौलिहवामा ठूलोमामुकोमा पढ्न बसेको थिएँ। खेल्ने–कुद्ने उमेर थियो।' निराजनले आफूमा फुटबलको रस कसरी बस्यो, त्यो बताउन थाले। उनको कथा अरू सबै खेलाडिको जस्तो छैन, जसले झुम्रोमा भुस भरेर फुटबल खेल्थे।
'फुटबलको क्रेज हुँदै गर्दा हामीले तौलिहवामा एउटा क्लब बनायौँ। पैसा उठाएर फुटबल किन्यो र खेल्यो।' उनी भन्छन्। निराजनले उतिबेला नै मुड चेन्ज गरेको भए अहिले उनी फुटबलर हैन क्रिकेटर बन्ने रैछन्। क्रिकेट खेल्दा विकेट किपर बस्ने निराजनको क्रिकेटमै राम्रो प्रदर्शन देखेर साथीहरूले 'ए तिमी त फुटबल भन्दा क्रिकेट पो राम्रो खेल्ने रैछौ' भनिदिए। यी फुटबलर उतिबेलाका साथीको कुरा सम्झेर मुसुक्क हाँसे। किनकी क्रिकेट जतिसुकै राम्रो खेलेपनि उनलाई फुटबलको भूतले तानीसकेको थियो। 'मैले फुटबलभन्दा अन्त ध्यानै मोडिनँ।' यसरी उनी फुटबलमै रमाउन थाले।
तौलिहवाबाट कंचनपुर हिँडे निराजन...
Posted by CP Aryal (सिपी अर्याल) at 9:14 PM